Abakhiqizi nabahlinzeki be-Dropout Fuse Cutout | I-China Dropout Fuse Cutout Factory
Izixhumanisi / izakhi ezijwayelekile ze- “K” ne- “T” zihlukaniswe zaba izixhumanisi / izakhi ze- “KB, KU, KS” ezingaphansi kohlobo oluthile ezibhekisela ohlotsheni olujwayelekile, uhlobo lwendawo yonke kanye nohlobo lwesikulufu ku-IEC-282 ejwayelekile. Zisebenza ekukhipheni i-fuse cutout nge-11-36kV. 1. Imodeli yakamuva enenkinobho: yenziwa ngesixhumanisi sohlobo lwe- “K” nesivinini sokuncibilika esingu-6-8 nohlobo lwe- “T” ngejubane eliyi-10-13 lokuncibilika Zisetshenziswa kakhulu ekuphumeni kwe-fuse cutout. 2. Imodeli ejwayelekile w ...
uchungechunge lokulahla i-fuse YK4
I-General Fuse Cutout uhlobo lwangaphandle lwamandla aphezulu we-transformer yokusabalalisa noma imigqa yokusabalalisa futhi isetshenziselwa ikakhulukazi ukuvikela abaguquli noma imigqa ekulweni nomthelela ophakanyiswe yisifunda esifushane, ukulayishwa ngokweqile nokushintshwa kwamanje. I-drop-out fuse cutout yakhiwe ukusekelwa kwe-insulator kanye ne-fuse carrier, oxhumana nabo be-static ababekwe ezinhlangothini ezimbili zokuxhaswa kwe-insulator kanye nokuxhumana okuhambayo okufakwe emaphethelweni amabili wesithwali sefuse. Ingaphakathi lesithwali sefuse yi-extingui ...
uchungechunge lokulahla i-fuse YK3
Uchungechunge lwe-Dropout Fuse YK2
Uchungechunge lwe-Dropout Fuse YK1
I-General Fuse Cutout uhlobo lwangaphandle lwamandla aphezulu we-transformer yokusabalalisa noma imigqa yokusabalalisa futhi isetshenziselwa ikakhulukazi ukuvikela abaguquli noma imigqa ekulweni nomthelela ophakanyiswe yisifunda esifushane, ukulayishwa ngokweqile nokushintshwa kwamanje. I-drop-out fuse cutout yakhiwe ukusekelwa kwe-insulator kanye ne-fuse carrier, oxhumana nabo be-static ababekwe ezinhlangothini ezimbili zokuxhaswa kwe-insulator kanye nokuxhumana okuhambayo okufakwe emaphethelweni amabili wesithwali sefuse. Ingaphakathi lesithwali sefuse yi-extinguishin ...